Nexus One ayaa hadda diyaar u ah horumariyayaasha sida ADP3 | Androidsis
Google ayaa horay ugu dhawaaqday sagootinta boggeeda internetka markii ay joojisay suuqgeynta Nexus One laakiin ma ahayn ilaa maanta in terminaalkan uu bilaabay inuu diyaar u ahaado horumariyeyaasha, isagoo noqday ADP3.
Mashiinnadan, ADPs, waa aaladaha ay Google u diyaariso horumariyayaasha si ay u tijaabiyaan codsiyadooda/ciyaartooda ka hor inta aysan suuqa soo gelin.
Midka koowaad wuxuu ahaa HTC G1 ku xiga Sixirka Htc iyo maanta Nexus One. In kasta oo laga yaabo in qaar ka mid ah ay ka fekeraan, maaha lacag la'aan oo qiimihiisu waa $ 529 taas oo aan ku qasbanahay in aan ku darno kharashka maraakiibta si loogu soo ururiyo qiyaastii $ 700, waxaan u maleynayaa in taasi tahay mid xad dhaaf ah.
Terminalka waxaa lagu iibiyaa bilaash, ma iibsan kartid wax ka badan 10 unug wuuna la socdaa Android 2.1 rakibay laakiin isla marka ay isku xidho waxay soo dejin doontaa nooca cusub ee Android 2.2. Terminalka waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo koontada horumariyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nexus One ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha sida ADP3
Charles Walls dijo
Saacadaha wanaagsan ... waxay dhigi karaan bilawga sanadka, marka aysan jirin mobilada kale ee 2.x ee suuqa. Xitaa ma aadan ku iibsan karin akoon horumariye Horumariyayaashii aan bilownay namay siin terminal, waxaanan horay u raadinay nolosheenna, marka lagu daro qiimayaal kale oo ka yar.
Ku jawaab Carlos Paredes
Waa in sidoo kale lagu daraa kastamka, kuwaas oo beryahan aad u adkeyd (waxaan u malaynayaa in dhibaatada jirta awgeed). Dhanka kale, qiimuhu uma eka mid xad-gudub ah oo dhan iyadoo la tixgelinayo in ay tahay telefoon bilaash ah, $ 529 waa qiyaastii € 400 ... aad uga jaban dukaamada halkan lagu iibiyo (waxaan ku adkaysanayaa, bilaash), xitaa ka dib marka lagu daro maraakiibta .
Ku jawaab juanjux
Hi, waxaan ka imid Peru, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u heli karo xisaab horumariye,
U jawaab ELGIANKA